Fahaverezana data rehefa mampiasa Scanpst hanamboarana ireo rakitra PST tsy mety simba
Home Products DataNumen Outlook Repair Fahaverezana data rehefa mampiasa Scanpst
Rehefa mampiasa Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) ianao hanamboarana rakitra efa simba na simba Outlook folder (PST) dia afaka mahita ny lesoka ao amin'ilay rakitra PST ilay fitaovana, saingy ampahany kely fotsiny amin'ireo angon-drakitra no azonao averina, miaraka amin'ny rehetra. ny angona ambiny lost ao amin'ny rakitra PST raikitra.
Ny fahafahan'ny scanpst dia tena voafetra. Rehefa be loatra ny kolikoly na ny fahasimban'ny rakitra PST, dia ny scanpst ihany no afaka mamerina ampahany kely amin'ny angona.
Tokony hampiasa fitaovana matihanina ianao DataNumen Outlook Repair manamboatra ny rakitra PST maloto. Miaraka amin'ny fandefasana fandaharana sy algorithmika be pitsiny, DataNumen Outlook Repair ho sitrana foana most ny tahirin-kevitra azo averina mamorona ilay rakitra PST simba, betsaka kokoa noho ireo voahodina tamin'ny scanpst, noho izany io no fitaovana fanarenana Outlook tsara indrindra eny an-tsena.
File maloto Namboarina ny scanpst File namboarin'i DataNumen Outlook Repair
(lahatahiry 2 ihany no azo, mailaka 0% no sitrana)
(Angon-drakitra 100% azo averina)
(lahatahiry efatra ihany no azo, mailaka 0% no sitrana)
(mailaka 78% ihany no tafaverina)
(mailaka 49% ihany no tafaverina)